Roa lahy mpinamana no niara-nisotro toaka tao Ankisatra ny 3 desambra 2020. Tsy nody an-trano ny raim-pianakaviana iray, 35 taona, ka nahagaga ny fianakaviany. Roso tamin’ny fikarohana azy ireto farany ny marainan’ny 4 desambra 2020. Ankona ireo iraka raha nahita azy nitsirara efa tsy nisy aina intsony tao Ambahibe. Ny andron’io ihany dia nampandre ny Zandary ny fianakaviana sy ny Fokontany. Nanokatra fanadihadiana avy hatrany ny Zandary, ka rehefa notsirihina niaraka tamin’ny mpitsabo avy ao amin’ny CSB2 Betanatanana ny faty dia nahitana ratra tamina zava-maranitra ny vatany. Natao ny fikarohana ilay tovolahy, 22 taona, niara-nisotro tamin’ity raim-pianakaviana ity, izay ahiahiana ho nahavanon-doza.
Lehilahy iray, mpanarato, 36 taona no nindaosin’ny fahafatesana ny 8 desambra 2020 tao Tsararivotra, Fokontany Navana, Distrika Maroantsetra vokatry ny fihinanana trondro natao tsaky toaka. Nahazo trondro roa io lehilahy io. Botohanana no fiantsoana io karaza-trondro azony io, ary mila fikarakarana manokana vao azo hohanina. Ny harivan'io andro io ihany anefa dia nataon'io mpanarato io masimasina na tsaky toaka ireo trondro roa ireo. Vokany, narary io mpanarato io ny alina, ary maty ny marainan'ny 08 desambra 2020. Voamarin’ny mpitsabo avy ao amin'ny CSB II Anjahana sy solontena avy amin'ny asa fanjonoana ao Maroantsetra, ary ny mpitandro filaminana, tao aorian’ny fitsirihana fa maty noho ny fihinanana io trondro io ilay mpanarato. Naverina amin'ny fianakaviana ny razana taorian'ny fizahana natao. Nentanina ny mponina tsy hihinana io karazan-trondro io. (Jereo Sary Tohiny)
Mitohy ny fampianarana ary tazomina ireo saram-pisoratana anarana. Anisany nivoitra ireo nandritra ny dinika an-databatra boribory notanterahina androany tao amin’ny efitra fivorian’ny Filankevitry ny Faritra Atsinanana manoloana ny disadisa ao amin’ny campus Barikadimy, ka nikatsahana vahaolana hizoran’ny asa pedagôjika eo anivon’ny oniversiten’i Toamasina, ao anatin’ny fitoniana. Nitarika ny fihaonana ny Governoran’ny Faritra Atsinanana, RAFIDISON Richard Théodore, ary niatrika izany ny avy amin’ny fitandroana ny filaminana nahitana ny Prefen’i Toamasina, ny mpitandro filaminana, ny filohan’ny oniversiten’i Toamasina sy ireo sojaben’ny teny aman-tsoratra sy ny DEGMIA, ny talen’ny kabinetran’ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa sy mpanolontsaina teknika roa, ny Ben’ny tanànan’i Toamasina, solontena efatra avy avy amin’ireo mpianatra mitokona sy ireo mitaky ny hitohizan’ny fampianarana ary koa solontenan’ny Ray aman-drenin’ny mpianatra sy ny vovonana miahy ny filaminana ao Barikadimy.
Niainga androany Talata 08 desambra 2020 tao amin'ny Jirama Ambohimanambola, Antananarivo ireo fiarabe hanao ny "Caravanes de la lumière" hitondra ireo hazavàna Led Cobras hapetaka manerana ireo renivohitry ny Distrika mbola tsy nisitraka izany. "Hazavàna ho an'ny rehetra" no tanjona, ka hisitraka izany avokoa ireo renivohitry ny Distrika rehetra manerana ny Nosy hatramin'ny faran'ny taona 2020. Renivohitry ny Distrika miisa 50 no hisitraka hazavàna an-dalam-be, izay fiaraha-miasan'ny Jirama sy ny Ministeran'ny Angovo ary ny Akoranafo, hanomezana endrika ny tanàna ary koa hanamafisana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 08 décembre 2020 17:10
Sary : Ejeda Misafiry
Ejeda : Voasambotry ny Fokonolona i Rekoso, jiolahy raindahiny
Mpamaky trano gaigilahy, mpanakan-dalana nampijaly ny mponina tao amin’ny Kaominina Ejeda, Distrika Ampanihy Andrefana i Rekoso. Maro no efa nahita faisana taminy. Voasambotry ny Fokonolona izy rehefa ela nitoratorahana, ary eo ampelantanan’ny mpitandro ny filaminana ankehitriny atao famotorana. (Sary : Ejeda Misafiry)(Jereo Sary Tohiny)
Taolan-dava miisa 125 natao tao anaty gony lehibe iray no hitan'ny Fokonolona narian'olon-tsy fantatra tao anaty lobolobo, tao Kelimetsaka Fokontany Avaratsena, Kaominina sy Distrikan'i Betafo ny tolakandron’ny 05 desambra 2020. Taorian’ny fampandrenesana voarainy dia niara-nidina ifotony nizaha ireo taolana ny Zandary, ny mpitondra ary ny mpiasan'ny fahasalamana. Notazomina anaty tranom-paty moa izany taolana izany mandra-pahatongan'ny olona mety ho tompony. Hatreto anefa, tao anatin'ny fari-piadidian'ny Zandarimaria ao Mandoto dia tsy naharay tranga vaky fasana nandritra ny taona 2020.Ny Zandary ao Betafo no manao ny fanadihadiana. (Jereo Sary Tohiny)
Hiakatra 75 000 hekitara ny velarantany hovolena hazo isan-taona eto Madagasikara. Ireo hazo mamaly ny filan'ny mponina isam-paritra, manome angovo, mamerina ny toetra sy ny tsiron'ny tany, ary hazo fihinam-boa no hatao laharampahamehana. Ahitana taratra izany ny any amin'ny faritra Matsiatra Ambony, izay manana tanin-janakazo telo, ka anisany ny ao Sahambavy izay kendrena hamokatra hatramin'ny zana-kazo 75 000 isa. Misy tanin-janakazo ihany koa ao Besorohitra izay tantanan'ny miaramila, manana tanjona hamokatra zanakazo 150 000 isa ary ny ao Iboka.Tanjona apetraka ny hahazoana zanakazo 300 000 ho an'ny faritra Matsiatra Ambony iray manontolo. Nambaran'i Minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy Rahariniriana Baomiavotse Vahinala fa paikady sy fanavaozana apetraky ankehitriny ny hamboly ireo hazo ilain'ny isam-paritra, hazo manome angovo, hazo fihinamboa ary indrindra ireo hazo afaka mamerina sy manarina ny toetra sy ny tsiron'ny tany efa simba.
Saron’ny Polisy misahana ny sisintany miasa ao amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Fascene - Nosy Be nandritra ny fisavana entan’ny mpandeha handray sidina ny sabotsy 05 desambra ny volamena milanja 3kg600. Nafenina tao anatin’ny vatoaratry (batterie) ny solosaina miisa telo ireo volamena ary kasaina hoentina any Dubai. Teratany vahiny miisa enina, miampy teratany malagasy iray mpandika teny, no voarohirohy amin’ireto volamena ireto, ary notanana anaovana famotorana amin’izao. (Jereo Sary Tohiny)
Manjaka ny mpanendaka eny amin'iny lalana iny. Manindron'antsy avy hatrany rehefa mifanehitra aminy, indrindra ireo mody harivariva manodidina ny amin'ny fito eo. Olona mitondra kitapo matetika no tena lasibatr'ireo mpanao asa ratsy. Raha sendra vehivavy moa dia aholan'izy ireo no sady endahany. Ny manohitra dia voatsatok'antsy avy hatrany. Mitaraina araka izany ireo mponina. Na dia efa manao izay ho afany aza ny mpitandro ny filaminana dia ilaina ny fifandrombonana samy mpiray monina mba hialana izao asa ratsy mifanesisesy izao hoy ireo mponina eny. Efa maro ny fitarainana mahakasika ity fanendahana miampy tsindron'antsy ity, fa dia mbola tsy nahitam-bokany hatreto. Miandry ny hisian'ny fahalemana ny mponina amin'izao vanim-potoana sarotra izao.